Archives Traveling in China " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Asia » Mandehandeha any Sina
Mandeha any Sina izahay. Gazety mpitsangatsangana. Zava-manintona sy valan-javaboary. Zavatra tokony hatao.
Views: 79 Valan-javaboary tsara tarehy 12 indrindra ao Shina Lisitry ny votoatin'ny valan-javaboary angamba tsy ny zavatra voalohany tonga ao an-tsainao rehefa mieritreritra an'i Shina ianao. Na izany aza, ity firenena ity dia manana valan-javaboary 200 tsy manam-paharoa. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nanao ezaka tokoa ny governemanta sinoa hanitarana ny rafitry ny valan-javaboary. Hatao indrindra hanefana ny fandotoana, hiarovana ny harena voajanahary ary ...
Views: Toerana 62 Mahagaga indrindra any Sina Atsinanana Lisitry ny atiny Sina Shina dia tontolon'ny azy. Manana tantara manankarena izy, misy tanàna mihoatra ny 10 taona. Nandritra ny taonjato maro, atsinanan'i Sina dia namorona atmosfera izay mampitony sy mampiala ny fanahy. Mampientanentana anao ny saina rehetra any Sina Atsinanana: manomboka amin'ny tanàna be rano, ampita lakandrano feno rano mihetsiketsika, mankamin'ny ...
Views: 58 10 Ny toerana mahatalanjona indrindra any avaratr'i China Lisitry ny atiny Ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina dia firenena midadasika sy maro karazana. Noho ny habeny dia tsy azo atao ny mahita azy rehetra amin'ny dia iray. Saingy misy fahitana mahaliana manerana ny firenena. Sina Avaratra no safidy tsara indrindra ho an'ireo mpandeha voalohany. Sina Avaratra no ahitanao ny renivohitra ...
Views: 77 10 Ny ankamaroan'ny toerana mahatalanjona any atsimon'i China Lisitry ny atiny Sinoa sy Etazonia dia mitotaly mitovy habe amin'ny tany, fa i Shina kosa dia manana olona efa ho an'arivony tapitrisa maro kokoa. Mety ho sarotra ny mitety an'ity firenena midadasika ity. Saingy ho lasa mora kokoa kokoa ianao raha mizara an'ity firenena ity amin'ny ampahany kely kokoa arakaraka ireo teboka kardinaly. Eto …
Views: 62 zava-misy tsy fantatra momba ny Great Wall of China Great Wall of China. Ny iray amin'ireo zava-mahatalanjona vaovaon'izao tontolo izao, ny rindrin'ny Great China, izay tafiditra ao anatin'ny lisitry ny New tujuh zava-mahatalanjona eran'izao tontolo izao, dia iray amin'ireo tsangambato malaza indrindra eto an-tany, saingy mety misy zavatra vitsivitsy izay mbola tsy fantatrao. Ny rindrina mamakivaky ny ambanivohitr'i Sina dia feno ...